My Paradise - Flowers In A Heaven: SkinnyMint Teatox
ခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွယ်ချင်သူများနှင့် ဗိုက်သားကို အဆီကျ ချပ်ရပ်ချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ညွှန်းလိုက်ပါရစေရှင်။
အဲဒါကတော့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်သလိုမျိုး မနက်နဲ့ ညတွေမှာ သောက်သုံးရမယ့် teatox teabag လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေး၊ အဆိပ်အတောက်တွေကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းလေးပါ။ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
ဒီ teatox tea ကို သောက်သုံးနေစဉ်အတွင်း အစားရှောင်စရာမလိုပါဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း စားသုံးပေးလို့ ရပါတယ်။ မနက်အတွက်ဆိုရင် morning boost tea အထုပ်ကို သောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီး ညဘက်အတွက် night cleanse tea ကို သောက်သုံးပေးရပါမယ်။ night cleanse tea ကို ၂ ည တစ်ခါ သောက်ပေးရမှာဖြစ်သလို သင့်ရဲ့ teatox စစချင်းရက်ရဲ့ ညမှာ သောက်ပေးရမှာပါ။ အဆီမြန်မြန်ကျချင်သူများကတော့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပါ တွဲလုပ်သွားရင် ပိုထိရောက်ပါတယ်ရှင်။
Teatox program ၂ ခုကတော့ ၁၄ ရက်စာ teatox နဲ့ ၂၈ ရက်စာ teatox ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ၁၄ ရက်စာကတော့ စတင်သောက်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မရှိလို့ စိတ်ချလက်ချ ၀ယ်ယူသောက်သုံးနိုင်ပါသည်ရှင်။ ၁၄ ရက်စာ အထုပ်ထဲမှာ မနက်ပိုင်း သောက်ဖို့ Morning boost ၁၄ ထုပ်မှာ ပါမှာဖြစ်ပြီး ညပိုင်း သောက်ဖို့ Night Cleanse ၇ ထုပ် ပါရှိပါမယ်။ ၂၈ ရက်စာ အထုပ်ထဲမှာဆိုရင် မနက်ပိုင်း သောက်ဖို့ Morning boost ၂၈ ထုပ်မှာ ပါမှာဖြစ်ပြီး ညပိုင်း သောက်ဖို့ Night Cleanse ၁၄ ထုပ် ပါဝင်ပါမယ်။
Morning Boost teatox မှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Green Tea, Yerba Mate, Nettle Leaves, Dandelion, Guarana Fruit, Grapefruit leaves, Strawberries နဲ့ Pineapples တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Night Cleanse teatox မှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Ginger Root, Orange Leaves, Lemongrass, Senna Leaves, Peppermint, Licorice Root, Hawthorn Berries နဲ့ Psyllium Husk တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ Morning Boost ကို မနက်စာ စားအပြီးမှာ သောက်သုံးနိုင်သလို Night Cleanse ကို ညစာစားပြီး အိပ်ရာမ၀င်ခင်မှာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
မြတ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောရမယ်ဆိုရင် မြတ်သောက်တာ ၁၄ ရက်စာတစ်ထုပ်တော့ ကုန်သွားပြီ။ မသောက်ခင် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်သေးတယ်။ အဲ့ဒါမှ သောက်ပြီး ဘာထူးခြားလဲ ဆိုတာ သိမှာလေ။ မသောက်သုံးမီနဲ့ သောက်သုံးပြီး ကွာခြားချက်ကတော့ မြတ်ရဲ့ ခါးမှာ waistline ကို ကောင်းကောင်းမြင်ရပြီး အဆီတွေ တော်တော်လေး ကျသွားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများမှာ သူတို့ရဲ့ အဆီပိုတွေက ၀မ်းဗိုက်မှာ သွားစုနေတတ်ပါတယ်။ ဒီ teatox ရဲ့ အဓိက ကောင်းကျိုးကလည်း အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ဗိုက်ပူဖောင်းကားတာကို လျော့ကျစေခြင်းပါ။
SkinnyMint teatox ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ထုပ်ပိုးပါသည်။
မှတ်ချက်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ကလေးနို့တိုက်ကျွေးသူများ မသောက်သုံးသင့်ပါ။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး အလှတွေ တိုးနိုင်ပါစေရှင်။
၀ယ်ယူချင်သူများ ဒီလင့်ခ် မှာ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Ashley Myat at 3:34 PM
Ellen Yang said...
I wanna buy it, where can I get?
If you want, you can order to me.
Which one do you prefer to buy in 14 day teatox and 28 day teatox?
Hello. Can I still order this one? .Thanks